Ku saabsan Unite Top
Damiishaha birta ah ee duugga ah
Iibiyaha toosan oo aan birta ahayn
Mashiinka saxaafadda birta birta ah
Mashiinka xiirida birta
xiiraha birta xaydha
mashiinka xiirashada culus
Mashiinka jebinta Bale
Iibinta Iyo Adeegga
Y81 taxanaha biraha compactor biraha
Maxay yihiin noocyada ugu waaweyn ee biraha qashinka lagu dubo suuqa? Waxaa jira saddex nooc oo waaweyn oo caadi ah, kuwaas oo ah, baakad gacmeed toosan, baakad gacmeed Horizontal, xidhmo toos ah oo toos ah. Sidee looga iibsadaa kombuyuutar biraha qashinka saldhigga baakadaha? Mugga gaarka ah, yacni, tixgeli ...
Y81 mashiinka wax lagu kaydiyo ee birta ah ee haamaha ah
Sababtoo ah khayraadka macdanta oo kooban oo aan dib loo cusboonaysiin karin, iyadoo horumarka joogtada ah ee bani aadamka, kheyraadkaas si joogto ah loo yareeyo, kheyraadka yari wuxuu ku qasban yahay inuu noqdo xaalad uu aadamigu u baahan yahay inuu si toos ah u wajaho. Ifafaalaha hore iyo kan cusub ee badalay ...
Rakibaadda iyo khal -khalinta mashiinka baaldiyaha biraha ee Y81
Mashiinku ma laha gariir la taaban karo marka uu shaqeynayo, sidaa darteed ma jiro shuruud gaar ah oo aasaaska u ah. Isticmaalayaasha waxay dejin karaan mashiinka gudaha waxayna ku shubi karaan sagxadda caadiga ah ee shubka iyadoo loo eegayo xaalado gaar ah. In isku xigxiga rakibidda, martigeliyaha waa in la dhigaa firs ...
Mashiinka mashiinka qafiifka ah ee birta ah ee qashinka ah iyo dhibka
Burburka baler -ka birta ah ee haamaha -biyoodka iyo hannaanka go'aaminta qorshaha dayactirka. Falanqee sababaha suurtogalka ah ee cilladda iyadoo lagu saleynayo calaamadda cilladda oo la tirtiro sababaha mid mid ilaa inta laga helayo sababta ugu dambaysa ee cilladda. Waa la xaqiijin karaa ...
Horudhaca teknolojiyadda ee taxanaha Q91Y mashiinka xiirashada gantaalka culus
Taxanaha Q91Y mashiinka xiirashada gantry waajibaadka culus waa nooc ka mid ah qalab ku habboon ka shaqaynta xiirid xoqan oo culus. Taxanahayaga Q91Y mashiinka xiirashada gantry waajibaadka culus wuxuu ku habboon yahay bir dhuuban, bir bir ah, saxan bir ah, saxan nikkel, bir, bir wareegsan, tuubo bir ah, co ...
Dayactirka Y81-2500 Mashiinka Mashiinada Haydarooliga ee Xidhmada Biraha
JIANGYIN Midayn mashiinnada warshadaha culus ee ugu sarreeya Y81-2500 mashiinka wax-qabad ee biraha xirxira wuxuu xakameynayaa wax-ka-beddelka iyo xirxiridda qashinka birta ee aaladaha hydraulic-ka, kaasoo leh sumcad ballaaran iyo adeegsiga shirkadaha birta iyo birta iyo shirkadaha dib-u-warshadaynta qashinka, a ...
Isticmaalka iyo faa'iidooyinka baallaha birta duugga ah
Waxaa jira noocyo kala duwan oo biraha duugga ah, oo leh cabbirro kala duwan iyo samaan ama samaan, taas oo dhibaato weyn ku ah kaydinta, gaadiidka iyo gelinta foornada mishiinka birta si jimicsi loogu sameeyo. Intaa waxaa dheer, sii-haynta biraha duugga ah muddo dheer waxay sababi doontaa wasakhowga hawada oo yar, iyo ...
Muhiimadda dayactirka xirxirida biraha Haydarooliga
Joogtaynta nidaamka haydarooliga ee baalliiyaha biraha ee Haydarooliga waa mid ka mid ah tallaabooyinka muhiimka ah ee lagu dhimayo gelinta qalabka iyo qiimaha hawlgalka ee dhibcaha wax -qabad ee nooc kasta oo alaab ah dib loo isticmaalo. Samee shaqo wanaagsan oo dayactirka nidaamka hawo -mareenka qalabka birta birta ah sidoo kale waa mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ...
Hawlaha noocee ah ayuu leeyahay mashiinka xiirashada biraha?
Mashiinka xiirashada birta ayaa leh codsiyo kala duwan, hufnaan shaqo oo sareysa, hawlgal fudud, iyo dayactir habboon. Marti -geliyaha waxaa lagu rakibi karaa gudaha ama dibedda. Mashiinka xiirashada birta waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo hababka sayniska. Waxa ugu horreeya ayaa ah in mootada ay maamusho barnaamij ...
Soo koob geedi socodka shaqada iyo taxaddarrada mashiinka keegga biraha
Xiirashada biraha waa nooc ka mid ah qashinka la soo saaro ka dib marka la farsameeyo alaabta birta ama qaybaha. Waa alaabta ceeriin ee wax soo saarka biraha tayada sare leh. Si kastaba ha ahaatee, waxay u baahan tahay inay qabow ku riixdo mashiinka keegga xiirashada birta. Sababtoo ah dad badani ma yaqaanaan habka shaqo ee qalabka ...
Birta Baler, Compactor Caleen Iyo Baler, Baler Aluminium, Pop-Top Can Baler Qalabka, Iskuduwaha Birta Iskuday, Y81 Baler Haydarooliga,